Kemgbe ịgba alụkwaghịm ya na Alex Rodriguez, Jennifer Lopez na ex-Ben Affleck "na-anọkọ ọnụ."
Kemgbe ya na Alex Rodriguez gbara alụkwaghịm, Jennifer Lopez na nke bụbu Ben Affleck “na-anọkọ ọnụ.”
Jennifer Lopez agbanweela asịrị mkpakọrịta nwoke na nwanyị na onye ọ bụbu Ben Affleck mgbe ịgba alụkwaghịm ya na Alex Rodriguez gbara.
Dabere na ET, di na nwunye a anọkọla ọnụ na Los Angeles, ma ha "bụ ndị maara nke ọma ma nwee ezigbo mmekọrịta, ezigbo ọbụbụenyi."
Isi mmalite ahụ kwuru, sị: “O doro anya na ha nwere ịhụnanya gara aga, ma ugbu a ha nwere ọbụbụenyi.” Ha niile hụrụ n'anya, nwee ekele, ma nwee ahụ iru ala na ibe ha na ọkwa ọkachamara. "
Ọzọkwa, ụzọ nke abụọ na-agwa ET: “Jennifer na Ben ezutewo oge ole na ole mgbe ọ gbachara alụkwaghịm na Alex. Jen na Ben abụwo ndị ibe ruo ọtụtụ afọ, ọ bụkwa ihe ha mere. ”
Dabere na Peeji isii, a hụla onye omee ahụ ọtụtụ oge na-eleta Lopez ma na-acha ọcha Escalade SUV ka a na-atụda ya n'ụlọ ya na nke ya.
Ọ bụ ezie na a gbabeghị foto na di na nwunye ahụ ọnụ, otu akwụkwọ gwara Page isii na "ndị nchekwa na-akpọrọ ya gaa otu mpaghara ma were ya pụọ ​​mgbe ha tinyechara awa ole na ole n'ụlọ ya."
Affleck, 48, kwuru na ọ kwụrụ Lopez, 51, ugboro atọ mgbe ọ laghachiri na Los Angeles site na Dominican Republic, ebe ọ na-ese ihe nkiri ọhụụ ya, "Shotgun Wedding."
A hụkwara Lopez ka ya na Alex Rodriguez rie nri abalị na Eprel 23 na Hotel Bel-Air, naanị ụbọchị ole na ole ha gosipụtara alụkwaghịm ha, dị ka akwụkwọ akụkọ ahụ si kwuo.
A hụrụ Affleck n'otu ụlọ nkwari akụ ahụ otu ụbọchị tupu J.Lo hụrụ A-Rod, n'April 22, ka SUV ọcha na-ada, nke mechara chụga Lopez na onye ya na ya na-azụ ahịa na nnọkọ azụmahịa, dị ka isi mmalite si kwuo.
Laterbọchị ka e mesịrị, n'April 28, a na-ekwu na Affleck na-apụta n'ụlọ Lopez's Bel Air, isi mmalite kwuru.
N'echi ya, Eprel 29, a hụrụ ya ka ọ na-atụba ụgbọ ala ya na Hotel Bel-Air n'ụtụtụ ma otu onye ọcha ahụ bụ Escalade buru ya gaa n'ụlọ J.Lo. Dị ka akụkọ si kwuo, otu SUV ahụ na-acha ọcha laghachiri ya na valet ụlọ nkwari akụ ihe dịka awa 3.12 mgbe e mesịrị.
A hụrụ Affleck ka ọ na-ahapụ SUV ọcha na-eyi uwe elu, uwe mkpụmkpụ, na sneakers ma buru akpa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Affleck na Lopez banyere na 2002, mana agbamakwụkwọ ha na-egbu oge na 2003. Ha gbara alụkwaghịm ọnwa ole na ole, na Jenụwarị 2004.
Onye omeewu ahụ toro ya n'oge na-adịbeghị anya na mkpuchi Eprel nke akwụkwọ akụkọ InStyle.
“Ekwetaghị m na ndị mmadụ ghọtara ya, mana akụkụ kachasị dị ịrịba ama banyere ya (yana enwere ogologo ndepụta) bụ ụkpụrụ ọrụ ya pụrụ iche,” ka o kwuru. O nwere obi umeala tinyere nkwenye dị mfe na ọ bụghị naanị na ị ga-agbasi mbọ ike ime nke ọma, mana ị ga-akarịrị onwe gị karịa. ”
O kwukwara maka ọdịdị nwa agbọghọbịa ya, na-asị, “Gịnị ka ị na-eme na Isi Iyi nke Ntorobịa? Gịnị mere ị ga-eji yie nke otú i mere na 2003, o yiri m ka m gbara afọ iri anọ… nke kacha mma? ”
Lopez chịrị ọchị ma too ya sị, “Ben na-atọ ọchị n'ezie! O yikwara ka ọ dị n'ezigbo mma. ”
Onye omeebe ahụ nwere ụmụ ejima dị afọ iri na atọ Max na Emme na di mbụ Anthony, ebe Affleck nwere ụmụ atọ nwere nwunye Jennifer Garner: Violet, 13, Seraphina, 15, na Samuel, 12.
Egburu ụmụ akwụkwọ Greenfield ọzọ, ndị ohi ahụ na-achọkwa N2 nde maka mgbapụta. April 27, 2021
Ọtụtụ mmadụ anwụọla na mwakpo a na-awakpo ndị Taraba na ndị a na-eche na ha bụ ndị ọzụzụ ehi Nwere ike 28, 2021
Edewo 10% nke ihe karịrị ijeri Njeri COVID2 April 21, 2021
Ndị isi ndị agha nke Naịjirịa kemgbe alaghachiri na ọchịchị onye kwuo uche ya Nwere ike 28, 2021
E buliela mmachibido iwu nke Emirates Airline, ma ụgbọ elu ga-amalite ọzọ n'oge na-adịghị anya. April 27, 2021
Achọpụtala Zuru Land na Kebbi, ebe ndị ohi na-arụ ọrụ, gbuo, ma tọọrọ n'enweghị ihe ọ bụla ruo otu afọ Nwere ike 3, 2021
Anwụchiela otu dibia bekee na-enyo enyo na ọ bụ ndị na-akọ gbasara Boko Haram April 27, 2021